Posted by Tranquillus | Mar 7, 2022 | Shabakada
Elisabeth Borne, Wasiirka Shaqada, Shaqaalaysiinta iyo Isdhexgalka, ayaa maanta saxiixday axdi shaqo iyo horumarin xirfadeed wakiilo ka socda laanta "gaadiidka wadooyinka iyo hawlaha kaabaya". Ujeedooyinka: dabooli baahida shaqaaleysiinta ee qaybta iyadoo la xoojinayo soo jiidashada.
Waaxda gaadiidka xamuulka qaada ayaa wajaheysa cadaadis shaqaaleysiin ah oo ay sii kordhisay xiisadda.
Si taas looga jawaabo, 2020 Dawladdu waxay bilawday mashruuc loogu talagalay "shaqo gaaban" oo qayb ka ah ajandaha bulshada ee lala yeesho shuraakada bulshada.
Ka dib markii la aqoonsaday shaqaaleysiinta iyo baahiyaha xirfadaha, Gobolka iyo wakiillada waaxdu waxay ballan-qaadayaan qorshe hawleed 2018-2022 si loo saadaaliyo loona taageero isbeddelada shaqada, la qabsiga shahaado bixinta iyo bixinta tababarka iyo sugidda waddooyinka shaqo ee shaqaalaha.
Ka qayb qaadashada horumarinta jihaynta dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee ku wajahan waaxda gaadiidka, gaar ahaan iyada oo la fulinayo waxqabadyo wacyi-gelin ah oo ay la kaashanayaan Wasaaradda Waxbarashada Qaranka iyo hawl-wadeennada shaqaalaha dawladda;
- Ka taageer shirkadaha iyo shaqaalahooda hirgelinta
Shaqooyinka gabaabsiga ah: saxeexa heshiiska horumarinta shaqada iyo xirfadaha ee u dhexeeya dawladda iyo laanta "gaadiidka xamuulka ah iyo hawlaha kaabaya". 9-Maarso, 2022Tranquillus
READ “Dib -u -tababarid xirfadeed waa ficil ballanqaad. "
horeKobcinta habka shahaadada CSPN (shahaadada amniga heerka koowaad)
socdaKa hel meelaynta tabaruca ee jeveuxaider.gouv.fr platform